Ukuhanjiswa kweelori zokuqala zeCummins kwiPenske Truck Leasing kukhunjulwa ziiHino Trucks
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuhanjiswa kweelori zokuqala zeCummins kwiPenske Truck Leasing kukhunjulwa ziiHino Trucks
Ebutsheni balo nyaka, u-Hino ubhengeze injongo yabo yokuvelisa iilori ze-Hino eziphakathi nezisindayo kunye neenjini ze-Cummins ziyathengiswa eMntla Melika ngasekupheleni kuka-2021. Kule nyanga, uHino uhambise eyokuqala kwezi zithuthi ePenske Truck Leasing kumsitho Isityalo sabo kwiZimbiwa Wells, WV njengesiqalo semveliso yokunyuka.
“Sivule iingcango zeziko lethu elitsha lokuvelisa iMineral Wells kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuxhasa ukwanda kwebango kunye nemveliso. Namhlanje, siyakwazi ukusebenzisa amandla okuvelisa ngobugcisa ukuze sikwazi ukwenza izinto ezintsha kwaye sihlangabezane neemfuno zabathengi bethu. Kuyachulumancisa ukubona owokuqala kwizinto ezintsha esiya kwiPenske Truck Leasing ebeliliqabane leHino Trucks ixesha elide., Utshilo uBob Petz, uSr.
Amalungu eeHino Trucks kunye neeCummins bebekhona ngexa bezisa uPaul Rosa, uSekela Mongameli oPhezulu wezoThengiso kunye noCwangciso lweFleet yePenske Truck Leasing, nesitshixo selori yokuqala.
"Sinobudlelwane obude kunye noHino kwaye bebengabaxhasi abathembekileyo beelori ezikumgangatho ophezulu kwizithuthi zethu zokuqeshisa iilori kunye neelori ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini. Sijonge ukubandakanya ezi zithuthi kwizithuthi zethu kwaye siyaqhubekeka ukubulela ngenkxaso ebalaseleyo esibonelelwa yiHino, ”utshilo uRosa.
"Ukudityaniswa okukhawulezileyo kweinjini zeCummins B6.7 kunye neL9 kwiiHino L & XL Series iilori bubungqina bokuba bhetyebhetye kunye nentsebenziswano phakathi kwamaqela ethu," utshilo u-Amy Boerger, uSekela Mongameli weCummins kunye noMphathi Jikelele, kuMntla Melika kuHola wendlela. "Singathanda ukuvuyisana neHino Trucks ekuqaleni kwemveliso, kunye nePenske Truck Leasing ngokuthatha iiHino L Series ezixhaswe yiCummins."
Itraki eziswe luthotho yi-22MY L Series, inikwe amandla yi-Cummins B6.7 injini kwaye iyinxalenye yeHino's-up-up Class 6 & 7 eqhelekileyo iilori ezinedumela kushishino lokubonelela ngexabiso eliphantsi lobunini kwiklasi yayo kunye nokhuseleko olutsha Iimbonakalo. Iilori zakwaHino zisandula ukunikezelwa ngexabiso kwiiDigests zexabiso eligciniweyo ngexabiso lokukhuphisana kakhulu ngeZitroli eziPhakathi eziDinayo eziDidi kunye neCandelo eliqhelekileyo leChab & Chassis. I-Hino's L Series ikwanazo zonke iiseti zeenkqubo zokhuseleko kubandakanya uQinisekiso loLawulo lwe-Elektroniki (i-ESC), iNkqubo yokuDanjiswa koThintelo (i-CMS) Isilumkiso sokuShiya uMgaqo (i-LDW), i-Active Cruise Control (i-ACC) kunye nesixhobo sokubamba isihlalo somqhubi ukukhusela abathengi kwimayile emva kwemayile.